Sipra dia manao fitsapana COVID-19 isan-kerinandro ho an'ny mpizahatany tsy vita volo
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Sipra dia manao fitsapana COVID-19 isan-kerinandro ho an'ny mpizahatany tsy vita volo
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Chypre • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
I Sipra dia manao ny fanandramana COVID-19 isan-kerinandro ho tsy maintsy atao ho an'ireo mpizahatany tsy voatanisa
Ireo mpitsidika izay manana mari-pahaizana momba ny vaksiny COVID-19 na taratasy fanamarinana manamarina ny fahombiazany amin'ny aretina COVID-19 teo aloha dia afaka amin'ny fitsapana PCR.
Nanambara ny lalàna COVID-19 vaovao ho an'ny mpitsidika ny manampahefana any Sipra.
Ny fitsapana COVID-19 isan-kerinandro izao dia takiana ho an'ireo mpitsidika tsy voamarina
SafePass izao dia takiana amin'ny toeram-bahoaka rehetra.
Nanambara ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta Sipra ankehitriny fa misy famerana COVID-19 vaovao ho an'ny mpizahatany anio.
Manomboka amin'ny 1 Aogositra, ny mpanao fialantsasatra tsy voamarina rehetra ao Sipra tsy maintsy mandray fitiliana PCR isan-kerinandro. Ny fitsapana voalohany dia takiana manomboka amin'ny andro fahafito aorian'ny fahatongavan'ireo mpitsidika tsy voamarina eto amin'ny nosy.
SafePass izay manamafy ny tsy fisian'ny COVID-19 dia mila aseho rehefa mitsidika magazay misy mpitsidika mihoatra ny 10, ary koa amin'ny toeram-pitsaboana na aiza na aiza eto amin'ny nosy.
Raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra, amin'izao fotoana izao dia manan-kery hatramin'ny 31 aogositra ireo lalàna vaovao.